အင်္ဂလိပ်စာအသင်အပြ အလွန်ကောင်းသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီး ဒေါက်တာထင်အောင် | News and Periodical Enterprise
အင်္ဂလိပ်စာအသင်အပြ အလွန်ကောင်းသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီး ဒေါက်တာထင်အောင်
Submitted by npe-user on Tue, 11/24/2020 - 09:23
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ထိုလွတ်လပ်ရေးနှင့် ထက်ကြပ်မကွာလိုက်ပါလာမှုမှာ ပြည်တွင်း သောင်းကျန်းမှုများ ဖြစ်သည်။ (အချို့ပုဂ္ဂိုလ် တို့က ထိုပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုကို လွတ်လပ်ရေး၏ ဖွားဖက်တော်ဟုပင် ပြောင်လှောင်သရော် ခေါ်ဆိုကြပါ သေးသည်။)
ဤစာရေးသူမှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်က ပြည်မြို့ နိုင်ငံတော် တန်းမြင့်ကျောင်းတွင် အထက်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ပါ သည်။ လွတ်လပ်ရေးရအပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ နိုင်ငံရေး၊ ဝါဒရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ကွဲပြားခြားနားမှုများကို ရှေ့တန်းတင်လာ၍ သောင်းကျန်းမှုများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်လာသဖြင့် ပညာသင်ကြားရေးမှာ မတည်မငြိမ်ပင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
သောင်းကျန်းမှုအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံနေရာ အနှံ့အပြား၌ စာစစ်ဌာနများ ဖွင့်လှစ်မကျင်းပနိုင်တော့ပါ။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ စာစစ် ဌာနတစ်ခုတည်းအဖြစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ပင် ကျင်းပ ခဲ့ရပါသည်။ ဤစာရေးသူကောင်းစွာ မှတ်မိပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ထိုစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရန် ပြည် မြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ မီးရထားဖြင့် လာရောက်ခဲ့ရပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကျိုက္ကဆံကွင်းအနီး မြလမ်း၌ ခေတ္တ တည်းခိုနေရပါသည်။ သင်္ကြန်အပြီးမှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာစစ်ဌာနသို့ သွား ရောက်ဖြေဆိုရပါသည်။ တစ်ပြည်လုံးတွင် တစ်နေရာ တည်း၌သာ ကျင်းပခဲ့ရသော စာစစ်ဌာနဖြစ်ပါသည်။ ဤစာရေးသူ စာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့ရသော စာစစ်ခန်းမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အဆောင်နှင့် အနီးဆုံး ကပ်လျက်ရှိသော သုံးထပ်ကျောင်းဆောင်၏ အောက်ဆုံး အထပ် ထောင့်ခန်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ စာစစ်ခန်းကို ကြီးကြပ် သူ ဆရာမှာ မြန်မာဆရာ၊ တိုက်ပုံအင်္ကျီနှင့် ရှူးဖိနပ်စီးထား သည့် အမျိုးသားဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ် ဆရာကို ဤစာရေးသူ ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်ဖူး၊ တွေ့ဖူး ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခံ့ညားထည်ဝါလှသော ထိုဆရာကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်မှ ပြန်လည်တွေ့ရသောအခါ ဆရာသည် ဒဿနိကဗေဒဌာနမှ ဆရာကြီးဦးဖေအောင် ဖြစ်နေကြောင်း ပြန်လည်သိရှိရပါသည်။
စာရေးသူသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အောင်မြင် ၍ ၁၉၅၀-၅၁ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ် ဥပစာ ဝိဇ္ဇာတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသား ဖြစ်လာပါသည်။ အဆောင်နေခွင့်ကို ပင်းယကျောင်းဆောင်တွင် အောက် ဆုံးထပ်၌ အခန်းတစ်ခန်း ရရှိပါသည်။ ထိုစဉ်က အဆောင် တွင် တစ်ခန်းတစ်ယောက်နေခွင့်ရနေသေးသည့်အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ အဆောင်ဟောလ်ကျူတာမှာ သင်္ချာဌာနမှ ဆရာကြီး ဦးဘတုတ်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစဉ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်မှာ ဆရာကြီးဒေါက်တာ ထင်အောင်ဖြစ်ပါသည်။ *၁ ဆရာ ကြီးသည် ဝိဇ္ဇာပညာရပ်များ၊ ဥပဒေပညာရပ်များဆိုင်ရာ မဟာ ဘွဲ့များ၊ ပါရဂူဘွဲ့များ အထပ်ထပ်ကို ရရှိထား သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိခွင့်သိရှိမှတ်သားရပါသည်။ ဆရာကြီး ဒေါက်တာထင်အောင်ကို မလှမ်းမကမ်းမနီး မဝေးလောက်၌သာ မြင်တွေ့နေရပါသည်။ အရပ်ပုပု၊ ခပ်ဝဝ ဆရာကြီးတစ်ယောက်အဖြစ်ဖြင့်သာ တွေ့မြင် နေရခြင်း၊ လေးစားသမှု၊ ရိုသေသမှုပြုနေရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
(*၁ University of Rangoon Calendar for 1950-52, Calcutta Press, Rangoon. First Cover.)
စာရေးသူသည် ဥပစာဝိဇ္ဇာတန်းတက်ရောက်စဉ် အင်္ဂလိပ်စာကို အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမ ဒေါ်တင်စောမူ၏ အတန်း၌ တက်ရောက်သင်ယူရပါသည်။ ဆရာမ ဒေါ်တင် စောမူမှာ ဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင်၏ နှမ အငယ်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်က အင်္ဂလိပ်စာအသင်အပြ အလွန်ကောင်းသည်ဟု ကျော်ကြားထင်ရှားသော ဆရာ တစ်ဦးမှာ ဆရာဦးခင်မောင်လတ် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ ဦးခင်မောင်လတ် သင်ကြားသော အင်္ဂလိပ်စာအတန်း၌ အခြားအင်္ဂလိပ်စာအတန်းများမှ လာရောက်လေ့လာ နားထောင်ကြသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် အတန်းပြည့်လျှံ၍ အတန်းအပြင်ဘက်တွင် စုရုံးနားထောင် နေကြသည့် တပည့်အများအပြား တွေ့မြင်နေရပါသည်။
စာရေးသူ၏အတန်း၊ အင်္ဂလိပ်စာပြ ဆရာမဒေါ်တင် စောမူ နေထိုင်မကောင်းသဖြင့် အတန်းမဝင်ဖြစ်ပါ။ ဒေါ်တင်စောမူ အတန်းသို့ အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခ(ထိုစဉ်က ဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင်)ဆရာကြီး ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်လာ၍ အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ကြားပြသပေးပါသည်။
စာရေးသူတွေ့ချင်နေသော ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီး သည် ယခုအခါ အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခအဖြစ် ဥပစာဝိဇ္ဇာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ အတန်းသို့ ဝင်ရောက်သင်ကြားခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဤစာရေးသူအဖို့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ၊ ဆုံတောင့်ဆုံခဲရသော အခါအခွင့်ကို ရရှိသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလွန် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေရပါသည်။ ကောင်းစွာ မှတ်မိပါ သေးသည်။
ယခုအခါ စာရေးသူသည် မိမိတွေ့မြင်ချင်နေသော ဆရာကြီးကို အနီးကပ်မြင်တွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး၏ သင်ကြားပြသလမ်းညွှန်မှုကိုလည်း ကောင်းစွာလက်ခံရရှိနေပြီလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ကို ဤစာရေးသူ အနီးကပ်လေ့လာဖြစ်ပါသည်။ ကြည်ညို လေးစားပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရာ၌ ဆရာကြီးသည် ဟိတ်ဟန် မရှိပါ။ ရိုးစင်းသော ပကတိစိတ်နေစိတ်ထားအတိုင်း ဆရာကြီး၏ ဆရာဟန်အမူအရာသည်လည်း ဖြူစင်ရိုးစင်း နေပါသည်။ တပည့်များကိုလည်း လေးလေးစားစား
ပြောဆိုဆက်ဆံပါသည်။ ဤစာရေးသူက ဆရာကြီး အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုတွင် အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုမှုကို အထူးဂရုပြုသတိထား လေ့လာမိပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကား ကို ပြောဆိုရာတွင် ဖြည်းဆေးစွာနှင့် ပီသစွာ ပြောပါသည်။ (အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အင်္ဂလိပ်စကားကို အင်္ဂလိပ်အသံ နှင့်တူအောင် တမင်လုပ်၍ ပြောဆိုမှုရှိသည်ကို ကြားသိရ ဖူးပါသည်။) ဆရာကြီးသည် အင်္ဂလိပ်စကားကို အင်္ဂလိပ် သံလုပ်၍ မပြောပါ။ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်အမှန်အတိုင်း၊ ထိုအသံထွက်အမှန်အတိုင်း ထိုအသံထွက်ဖြင့်သာ ပြောပါ သည်။ ထိုအချက်သည် ဆရာကြီး၏ ထူးခြားချက်ဖြစ် ပါသည်။ ဆရာကြီးပြောသော အင်္ဂလိပ်စကား သင်ကြား ပြသသော အင်္ဂလိပ်စာကို စာရေးသူတို့ ကောင်းစွာ လိုက် နာ၊ မှတ်သားနိုင်ကြပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ အခက်အခဲ မရှိပါ။ တပည့်များ သိရှိနားလည်တတ်ကျွမ်းအောင် ဆရာကြီး၏ သင်ပြမှုဖြင့် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
ဆရာကြီး စာသင်ကြားရာတွင် တပည့်များ၊ စိတ်ပျော် ရွှင်အောင်၊ မှတ်မိသားမိအောင်၊ ရယ်စရာကလေးများကို ကြားညှပ်၍ ပြောဆိုသင်ကြားပါသည်။ ယနေ့တိုင် စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနေပါသည်။ ဆရာကြီး ဒေါက်တာထင်အောင် ပြောခဲ့သော*၂
“I am Pho Toke. I am from Moe Goke.
I play with O boke and Jyo yoke.
ဆိုသော စကားစုမှာ ကာရန်ကိုက် စကားတစ်ခုဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနေခြင်းပင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။”
(*၂ ဆု စာအုပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ပထမဆုံး ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒေါက်တာထင်အောင်၏ ဘဝခရီးနှင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၊ ပထမအကြိမ်၊ စာမျက်နှာ ၁၄ ရှု။)
ဤစာရေးသူသည် အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရသည့် ကျောင်းသားဘဝက ဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင် ရေးသားပြုစုခဲ့သည့် အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်ပုံနှိပ်တိုက်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့် A Book of English Verse အင်္ဂလိပ် ကဗျာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကို သင်ယူဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထို့ပြင် ကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဆရာကြီး၏ “မြန်မာ့ပုံပြင်သုံးဆယ်” Thirty Burmese Tales စာအုပ် ကိုလည်း သင်ယူဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ယခုအခါတွင် ဆရာကြီး၏ ကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အင်္ဂလိပ်ကဗျာစာအုပ်နှင့် အင်္ဂလိပ် ဖတ်စာ စာအုပ်များဖြင့် စာရေးသူတို့ သင်ယူခဲ့ဖူးရုံ သာမက ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ယခုလို အတန်းဝင် ၍ အတန်းသင် သင်ကြားနေမှုကို တပည့်တို့ကိုယ်တိုင် က ခံယူရရှိနေရပြီ ဖြစ်သဖြင့် အတိုင်းမသိ ဝမ်းမြောက် ပီတိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့များရပြီးနောက် ဆရာကြီး နှင့် မဆုံတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဆရာကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် သီဟိုဠ်နိုင်ငံ(ယခု သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ)တွင် နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြောင်း၊ ထို့နောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်၍ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်၊ ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ် စသည်တို့၌ ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ် သွားရောက်ပညာသင်ကြားပို့ချနေကြောင်း သတင်းကောင်း၊ သတင်းစကားများသာ ကြား သိနေရပါသည်။
ဤစာရေးသူ အလုပ်ခွင်၌ ရှိနေစဉ်အတွင်း တစ်နေ့ ၌ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ အလုပ်ကိစ္စ တစ်ခုဖြင့် ရောက်ရှိသွားပါသည်။ လေဆိပ်ဧည့်ခန်း၌ ဆရာကြီး ဒေါက်တာထင်အောင်ကို အမှတ်မထင်အံ့ဩစွာ တွေ့လိုက်ရပါသည်။ ဆရာကြီးသည် လေဆိပ်ဧည့်ခန်း၌ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်မည့်သူမရှိ၊ တစ်ဦးတည်း တစ်ကိုယ်တော် တွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာရေးသူက ဆရာကြီး ကို ကောင်းစွာမှတ်မိသဖြင့် ဆရာကြီးအား သွားရောက် တွေ့ဆုံဂါရဝပြုပါသည်။ ဆရာကြီး၏ စာသင်သားတပည့် ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ဆရာကြီး၏ အသင်အပြကောင်းမှုကို ယခုတိုင် စွဲမြဲစွာမှတ်မိ၊ ကျေးဇူးတင်ရှိနေကြောင်း စသည် များကို ပြန်လည်ပြောပြသည့်အခါ ဆရာကြီးသည်များစွာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသွားပါသည်။ မိမိ၏ တပည့် နှင့် ယခုကဲ့သို့ အမှတ်မထင် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရခြင်း၊ ကြုံတောင့်ကြုံခဲအခွင့်အရေးရခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်း မြောက်ခြင်းတို့ကို ဆရာကြီးက ပြန်လည်ပြောကြားပါ သည်။ ဤတွေ့ဆုံမှုသည် ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံရမှုပင် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆရာကြီး ကွယ်လွန်သွား ကြောင်းသာ သတင်းစကားဖြင့်သာ သိရှိရပါသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီးဒေါက်တာ ထင်အောင်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ပြုစုပျိုးထောင် ပေးလိုက်သည့် (မွေးထုတ်လိုက်သည့်) ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ၏ သားကောင်းသားမြတ် ရတနာတစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီးသည် အမိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား တက္ကသိုလ်များ၌ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ စာပေ၊ ဝိဇ္ဇာပညာ ရပ်များ၊ ဥပဒေပညာရပ်များကို သင်ယူဆည်းပူးခဲ့စဉ် ကာလ၌ မဟာဘွဲ့များ၊ ပါရဂူဘွဲ့များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် စာပေ၊ ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့များ အများအပြားကို ရရှိခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် မြန်မာ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာကို ကမ္ဘာကသိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သူတစ်ဦး၊ မြန်မာပညာ ရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ကောင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါ သည်။
ဆရာကြီးသည် မိခင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမဆုံး ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် မိခင် တက္ကသိုလ်အား ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကျေးဇူးတုံ့ပြန် ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော ဆရာကြီး၏ တပည့်အဖြစ် စာရေးသူ တို့ ဆရာကြီးထံမှ သင်ကြားသင်ယူမှုတို့ကို ခံယူလိုက်ရခြင်း သည် ဆရာကောင်းတပည့်အဖြစ် ပန်းကောင်းပန် လိုက်ရခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ကာလ အကြိုဂုဏ်ပြုစကားအဖြစ် ရေးသားလိုက်ရပါ သတည်း။ ။
ဆောင်းပါးရှင် ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းဦး၏
၁၉၅၄ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ အထက၊ ပုတီး ကုန်း၊ ပြည်ခရိုင်
၁၉၆၀ ဘီအီးဒီဘွဲ့ မဟာသရေစည်သူ ဒေါက်တာဦးဘ၏ ပထမရွှေတံဆိပ် ဆုကို ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက ချီးမြှင့်ခဲ့
၁၉၆၀ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ အထက၊ အုတ်ဖို၊ သာယာဝတီခရိုင် အမ်အီးဒီဘွဲ့
(အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဟာဝိုင် ရီတက္ကသိုလ်)
၁၉၆၃ လက်ထောက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပညာမင်းကြီးရုံး
၁၉၆၄-၁၉၆၅ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ပုသိမ်ဆရာ အတတ်သင်ကျောင်း
၁၉၆၆-၁၉၇၇ လက်ထောက် သုတေသနအရာရှိ မှ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအထိ ထမ်းဆောင်
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး သုတေသန အဖွဲ့/ ဦးစီးဌာန
၁၉၇၇-၁၉၈၅ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အခြေခံ ပညာဦးစီးဌာန
၁၉၉၉ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဌာန သမိုင်း စာအုပ်ဖြင့် (အမျိုးသားစာပေဆုရ)
၁၉၉၉-၂၀၁၃ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံ ပညာရှင်အဖွဲ့
၁၉၉၉- ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပညာတန်ဆောင်
၁၉၉၉- ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ
၂၀၁၅-ဇန်နဝါရီ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် Doctor of Letters (Honoris
၂၀၁၅-မေ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဟာဝိုင်ရီ တက္ကသိုလ် Doctor of
Humane Letters, (Honoris Causa) ဘွဲ့
၂၀၁၅-ဇွန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပညာရေး အကြံပေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်
၂၀၁၈ ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေ တစ်သက်တာ စာပေဆုရ